I-Astronomy - iMeteorology kwiNet | Meteorology yenethiwekhi
I-astronomy Ngumxholo onomdla ngokwenene ongasoze uyeke ukusothusa yonke imihla. Yinzululwazi efunda iinkwenkwezi, iiplanethi kunye nendalo iphela ngokubanzi. I-etymology yayo ithetha "ukuKhanya kweenkwenkwezi." Ezi zinto zisesibhakabhakeni zijongwa yonke imihla eMhlabeni ziinzululwazi ngeenkwenkwezi kunye nezazinzulu ezifuna ukucacisa ukwenziwa kwendalo kunye nokusebenza kwayo.
Zininzi iindlela zokujonga ukuze sazi indawo emi kuyo, ukwakhiwa kunye nokuhamba kwezinto ezisemazulwini. Uninzi lwezifundo ezenziwayo zijolise kwindlela ezinokuthi zichaphazele ngayo iplanethi yethu.
Ezona mpucuko zakudala zachaza ngeenkwenkwezi ngeminye imibuzo enxulumene neentsomi, izithixo kunye neenkolelo zonqulo. Oku kubangelwe luhambo olude olwenziweyo. Enkosi ngenkqubela phambili yetekhnoloji kunye nolwazi, kuyaziwa ukuba uMhlaba ngomnye nje umzimba wasezulwini kwaye asikho embindini wendalo iphela. Indalo iphela ayinasiphelo kwaye yenziwe yiminyele, ilanga, iinkwenkwezi, iiplanethi ezininzi, iinyanga, iimeteorites, uthuli, iindlela, kunye neeasteroids.
Iteleskopu inegalelo Galileo Yayisesinye sezixhobo eziluncedo kakhulu kwi-Astronomy. Namhlanje, ngenkqubela phambili yetekhnoloji, iimpendulo ezicacileyo zinokunikwa malunga nemvelaphi yendalo iphela kunye nexesha lezinto ezisemazulwini. Izazi ngeenkwenkwezi ziye zanegalelo kulwazi oluxabisekileyo kwisayensi yeplanethi yethu kwaye ziyaqhubeka nokusebenzisa indlela efanayo yokujonga.
Ngokubanzi bafumana uncedo lwezemali kurhulumente, utyalo-mali lwabo olubiza kakhulu luxhaswa ngamaziko anoxanduva lokuthenga kunye nokuyila izixhobo eziqhubela phambili kunye nentlawulo noyilo lwamaziko ophando antsonkothileyo anje: NASA.
Kolu luhlu ungonwabela kwaye ufunde ngendalo yonke kunye nemvelaphi yayo. Ukusuka ekusebenzeni kwenkqubo yelanga, ukuya kwiimpawu zazo zonke iiplanethi, udlula kweyona miqolo ibalulekileyo kwaye uthintela imingxunya emnyama. Ungaphuthelwa ngumlingo we-Astronomy kwaye ujoyine ulwazi lomhlaba!
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Iiveki ze2 .
I-Jupiter yiplanethi enkulu kunazo zonke kwisixokelelwano selanga kunye neqela leeplanethi zegesi. Ndiyazi…
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Iiveki ze3 .
IPluto, iplanethi elityelweyo, ayisekho iplanethi. Kwinkqubo yethu yelanga bekukho iiplanethi ezilithoba de...
Xa sithetha nge-astronomy kunye nendawo yangaphandle, ingqikelelo ye-astro isoloko isetyenziswa. Nangona kunjalo, abantu abaninzi aba…
Yintoni esembindini weMilky Way
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Iiveki ze4 .
Siyazi ukuba iMilky Way ngumnyele wethu kwaye yingqokelela yeebhiliyoni ze…
Yenzelwe ntoni iteleskopu?
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Inyanga e-1 .
Yinto eyenziweyo eye yaguqula inzululwazi ngeenkwenkwezi nolwazi ngendalo iphela. Nangona kunjalo, asingabo bonke abantu ...
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Iinyanga ze2 .
Isixokelelwano sethu sezijikelezi-langa, okanye isixokelelwano sesijikelezi-langa njengoko sikwabizwa njalo, sizaliswe ziintlobo ngeentlobo zezinto ezisesibhakabhakeni,…
Umfanekiso womngxuma omnyama kumnyele wethu
Kwiminyaka emithathu eyadlulayo, uluntu lwezenzululwazi lweSiteko seHorizon Telescope (EHT) lothuse umhlaba ngefoto yokuqala ye…
Uvakala njani umngxuma omnyama?
Umngxuma omnyama kumbindi weqela le-Perseus galaxy inyanyaniswa nesandi ukusukela ngo-2003…
UStephen Hawking, uYuri Milner kunye noMark Zuckerberg bakhokela ibhodi yabalawuli kwinyathelo elitsha elibizwa ngokuba yiBreakthrough Starshot,...
Xa sithetha nge-astronomy, inkqubo yelanga kunye neeplanethi, sihlala sithetha nge-orbit. Nangona kunjalo, ayizizo zonke…
Siphila kwiplanethi engaphakathi kwiplanethi yelanga, yona ijikelezwe ngabanye ...
Ukuhamba komhlaba: ujikelezo, uguqulo, ukuvela kunye nenutation
Ithiyori yePanspermia yintoni imvelaphi yobomi?
Ithiyori enkulu yeBang Bang
Yintoni kwaye isebenza njani ithiyoriyitha yelanga?
Ikhalenda yenyanga ka-2018